Madaxweynaha xasan sheikh oo ka hadlaya munaasabada maalinta xoriyada ee dowladda Turkiga – Radio Daljir
Madaxweynaha xasan sheikh oo ka hadlaya munaasabada maalinta xoriyada ee dowladda Turkiga
Oktoobar 29, 2013 4:36 b 0
Muqdisho, October 29, 2013 – Madaxaweynaha Soomaaliya xasan sheikh maxamuud ayaa gaaray magaalada Istanbuul ee dalka Turkiga halkaas oo si diiran loogu soo dhoweeyey, waxaa uu madaxweyne xasan la kulmayaa ra?isal wasaare Ordogan iyo madaxweyne Abdalla guul.
Madaxweynaha oo xalay u amba-baxay dalka Turkiga ayaa waxaa uu kulamo kala duwan la qaadanaya madaxda oo ay ka arrinsan doonaan xiriirka labbada wadan iyo weliba doorka Tukriga ee Soomaaliya, qoraal ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay madaxweynuhu in uu mahadcelin doono Turkiga.
Docda kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka qayb gelaya munaasabada maalinta xorriyada ee dalka Turkiga 90 sano kadib, madaxweynaha ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeedinaya munaasabada sida lagu sheegay qoraalka dowladda.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda Turkiga waxay isla soo qaadi doonaan shirka Qaramada midoobey ee looga hadlayo arrimaha ciidamada Soomaaliya kaas oo dhowaan furmaya, madaxweynaha ayaa Turkiga ka dalbnaya in la taageero ajandaha Soomaaliya.
Isimada Puntland oo shir ka yeelanaya hanaanka ay u dhacayso doorashada soo socota (Dhegeyso)
Al-shabaab oo xalay madaafiic ku dhuftay garoonka Kismaayo iyo maamulka oo ka hadlay (Dhegeyso)